लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुहोस, हुनेछ धन वृद्धि ! (पूरा पढ्नु होस) -
Homeरोचक / विचित्रलाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुहोस, हुनेछ धन वृद्धि ! (पूरा पढ्नु होस)
July 20, 2018 Spnews रोचक / विचित्र, समाचार 0
हिन्दू धर्ममा कुबेरलाई धन वृद्धि गर्ने भगवान मानिएको छ भने चीनमा लाफिङ बुद्धलाई शुभ र धन वृद्धि गर्ने देवता मानिएको छ ।
निकै मानिसहरुले यस कुरालाई विश्वास गरेर लाफिङ बुद्धलाई घरमा ल्याएर राख्ने गर्दछन् । लाफिङ बुद्धको मुर्ति घरमा जथाभावी राखे काम नबन्ने वास्तुको भनाई रहेको छ । लाफिङ बुद्धलाई राख्नको लागी दिशा र स्थानलाई ध्यानमा राख्न जरुरी रहेको छ ।
यानी तपाईको जरूरत अनुसार घरमा लाफिङ बुद्ध राख्नुहोस् । कुनैपनि घरमा पूर्व दिशालाई परिवारको भाग्य र सुख शान्तिको स्थान मानिने गरिन्छ । तपाई आ-आफ्नो घरको सदस्य बीच आपसी प्रेम र तालमेल बढाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा लाफिङ बुद्ध पूर्व दिशामा राख्नुहोस् जो आफ्नो दुवै हात उठाएर हासीरहेको होस् ।
फेंगशुईको नियम अनुसार लाफिङ बुद्धलाई आफ्नो घरमा दक्षिण पूर्व दिशा राख्नु भयो भने यस दिशाको सकारात्मक उर्जा बढ्ने गर्दछ र धन, सुखलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ ।
साथै आफ्नो घरमा भएका सदस्यहरुको आम्दानी बढ्ने गर्दछ । जागीर, व्यवसाय, तपाइको विरोधिहरुबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसमा पनि यसले राहत पुर्याउने गर्दछ । लाफिङ बुद्धलाई घरमा या जहाँ राखे पनि यस कुराको ध्यान दिनु आवस्यक रहेको छ ।
लाफिङ बुद्धको उचाई तपाइको आखा बराबरसम्म होस् । यानी लाफिङ बुद्ध यस्तो ठाउँमा रहुन कि तपाई आउदा आउदै तपाइको नजर सिधै लाफिङ बुद्धमाथी परोस ।
अधिक उचाई या होचोमा यसलाई राख्न हुदैन । जसरी गणेशको मुख ढोकातर्फ हुनु शुभ मानिन्छ यस्तै मुख्य ढोका तर्फ हेर्दै गरेको लाफिङ बुद्ध धन वृद्धिलाई आकर्षित गर्ने मानिन्छ ।
लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुहोस
हुनेछ धन वृद्धि ! (पूरा पढ्नु होस)
यस्ता संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् केही राम्रो हुँदैछ ! ओम नम शिवाय लेखेर सेयर गर्नुस, सफलता हात पर्नेछ